သင့် လုပ်ငန်းကြီးထွား ဖောက်သည်များ များရစေဖို့အိုင်ဒီယာ (၁၀) ခု | မာသင်
သင့် လုပ်ငန်းကြီးထွား ဖောက်သည်များ များရစေဖို့အိုင်ဒီယာ (၁၀) ခု
⭐၁။ membership program တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။
လက်ရှိဈေးကွက်ဆိုတာ အရင်ကလို တစ်စုတည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကိုယ်ယုံကြည်ရာ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာအလိုက် ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ group ငယ်လေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အုပ်ပေါင်းစု ကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ ပတ်ပတ်ပြီး ကိုယ်ယုံကြည်သလို ယုံကြည်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းစုပြီး ဖွဲ့ထားတဲ့ membership အဖွဲ့Group တစ်ခုထောင်ပါ။
ပြီးရင် …. ဦးဆောင်ပါ။
ကိုယ့် customer တွေအတွက်…. ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ဦးဆောင်ပါ။
⭐၂။ ဖေ့ဘုတ် page တစ်ခု ထောင်ပါ။
လုပ်ငန်းတိုင်းက page တစ်ခုလောက်ရှိသင့်ပါတယ်။
page မှာ အားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် လူပေါင်းများစွာကို ခဏတာအတွင်းမှာ ထိတွေ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အပြင်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ကိုယ့်ဆိုင်မှာ တနေ့မှ လူတစ်ထောင်လောက်လာဖို့၊ ထိတွေ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ခဲပေမယ့် page ဆိုတဲ့အရာက ဒီလိုအဆင့်အရောက်ဖို့အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
⭐၃။ Content Marketing လုပ်ပါ။
Content ဆိုတာ အကြောင်းအရာပါ။
လူတိုင်းမှာ ပြောပြစရာအကြောင်းအရာ (Content) တစ်ခုမဟုတ်၊တစ်ခု ရှိကြပါတယ်။
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်းလာမေးကြည့်၊ တနေကုန်ထိုင်ပြောနေလို့ရတယ်.. ဟုတ်တယ်မလား။
ဒါပေမယ့် .…လုပ်ငန်းတော်တော်များများက လာမေးတဲ့အထိထိုင်စောင့်နေတယ်။
ပြောစရာရှိတာပြော.. .. ထွက်ပြော၊ ရပ်ပြော၊ အုပ်စုဖွဲ့ပြော၊ ဗွီဒီယိုရိုက်ပြော၊ စာရေးပြော၊ အသံသွင်းပြော၊ သီချင်းဆိုပြော၊ သံချပ်လုပ်ပြော၊ ဟစ်ဟော့လုပ်ပြော၊ စင်ပေါ်တက်ပြော၊ဖုန်းဆက်ပြော၊ Live လွင့်ပြော၊ Zoom လုပ်ပြော… အို.. ပြောနည်းကားအစုံပါပဲ။ အရင်ခေတ်မှာမရှိတာကော၊ ရှိတာကော….
အရေးကြီးတာ ..စီးပွားရေးလုပ်ပြီဆိုရင် …. အစုံသာပြောဗျာ။
ကိုယ်မပြောတတ်ရင် … လူဌားပြော။
⭐၄။ Affiliate Marketing လုပ်ပါ။
Affiliate ဆိုတာ ဘော်ဒါကြေးပေးတာကိုပြောဒါ။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကြာနေပြီ။ ရော့ . … ဘော်ဒါကြေးဆိုပြီး တစ်မျိုး ။ ရော့ .. ပွဲခ ဆိုပြီတစ်ဖုံ။
ရော့ .. ကော်မရှင်ကြေးဆိုပြီး တစ်ခု။ တစ်ခါတစ်လေ.. .ကြံဖန်ပြီး .. ရော့ .. လက်ဖက်ရည်ဖိုး ဆိုပြီးပေးတာ။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ကူပြီးရောင်းပေးလို့လေ။ ကိုယ့်ကို ကူပြီး customer ရှာပေးတာဆိုတော့ …. သေချာလုပ်တတ်ရင် အရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ထောင်လောက် ခန့်ထားသလိုပဲမဟုတ်လား။
အာမခံဆိုတာ Guarantee ကိုပြောတာ။
စိတ်ချ.. သုံးလို့ အဆင်မပြေရင် ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်။ အာမခံပါတယ်။
စိတ်ချ .. အကျိုးမရှိရင် ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်။ အာမခံပါတယ်။
စိတ်ချ.. အရသာမရှိဘူးဆိုရင် ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်။ အာမခံပါတယ်။
တကယ်အာမခံသလို လုပ်ရင် တကယ် စိတ်ချ ရပါတယ်။
အမှန်တော့.. ကိုယ့် ပစ္စည်းရဲ့အရည်သွေးကို ကိုယ်ယုံရင် … လုပ်နိုင်ရမယ်မဟုတ်လား။
အင်း .. ကိုမာသင်ရယ်… . ယုံတော့ယုံတယ်ဗျာ.…မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် … ကိုယ်ရောင်းမယ့် ပစ္စည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်၊
ကိုယ်တောင် သုံးချင်ရဲ့လားဗျာ… လို့။
⭐၆။ Freemium နည်းသုံးပါ။
Free နဲ့Premium ကို ပေါင်းထားတာပါ။
အင်မတန်မှ လုပ်ငန်းကို အလျင်အမြန် တိုးတက်စေတဲ့နည်းတစ်ခုပါ။
(အရှည်တော့မပြောတော့ဘူးဗျာ။ မားကက်တင်းအိုင်ဒီယာ (၃၀) သင်တန်းလာတက်လဲ့။ 😁 တကယ်ပါ။)
လုပ်ငန်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ ပရီမီယံဆိုတဲ့အပိုင်း နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။
ဥပမာ Dropbox ဆိုတဲ့ နည်းပညာကုမ္မဏီက သူ့ ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို အစပထမမှာစမ်းသုံးခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးအချို့ကို အခမဲ့ ပေးထားတယ်။ အချို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို လိုချင်ရင်တော့ အခကြေးငွေနဲ့ပရီမီယံဝယ်ပြီးသုံးပေါ့။
ဒါကလဲ တရားမျှတတယ်။ စမ်းသုံးပြီးမှ ကြိုက်မှဝယ်ပေါ့။
လုပ်ပုံလုပ်နည်းတော့ လိုတယ်။ မလုပ်တတ်ရင် .. ဂွင်ရိုက်တယ်၊ မျှားတယ်ပေါ့။ ဒီလိုထင်တတ်တယ်။
အမှန်တော့ .. စားသုံးသူအတွက်ရော၊ လုပ်ငန်းအတွက်ပါ အင်မတန်မှ မျှတတဲ့ မားကက်တင်းတစ်ခုပါ။
ဟင်.. ဘယ်လို ပစ္စည်းလက်ဆောင်တုန်း.. ဆိုရင် .. မသိဘူး ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့အရာပေါ့။
ခုခေတ်မှာ မွေးနေ့ဆိုရင် လိုင်းပေါ်ကနေ မက်ဆေ့လေးတစ်စောင်လောက် Happy birthday ဆိုပြီးရေးလိုက်ရင် ပြီးပြီ ဆိုတဲ့ခေတ်မှာ ကိုယ့် စားသုံးသူဖောက်သည်တွေကို တကယ်အလေးထားရင် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လို့ရတဲ့ ကဒ်ပြားလေးတစ်ခုလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပေးကြည့် ။ ခင်ဗျားလုပ်ငန်းကို သေချာမှတ်မိသွားပြီလို့ တွက်ထားလိုက်ပေတော့။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ .. ပို့ပေးတဲ့သူက ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်းပဲရှိလို့လေ။ 😂
⭐၈။ အရောင်းကောင်းဆုံးပစ္စည်းကို ချပြပါ။
ဝန်ဆောင်မှုဆိုရင် အရောင်းကောင်းဆုံး အပိုင်းပေါ့။
ဆိုင်ဆိုရင် အရောင်းကောင်းဆုံး အချိန်ပေါ့။
လူဆိုတာ အများရှိရာ အနည်းလာတတ်တယ်လေ။
စားသုံးသူဆိုတာလဲ လူပဲဆိုတာ မမေ့နဲ့။
ရောင်းကောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေကို လေ့လာကြည့်၊ စားသုံးသူမျှော်လင့်တာထက် ပိုပေး အဆစ်ထဲ့ပေးကြတယ်။
ရောင်းကောင်းတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေလေ့လာကြည့်၊ စားသုံးသူမျှော်လင့်တာထက် ပိုလုပ်ပေးတတ်ကြတယ်။
တည်းခိုသူများတဲ့ ဟိုတယ် တွေကိုကြည့်၊ တည်းခိုသူမျှော်လင့်တာထက် ပိုဝန်ဆောင်တတ်ကြတယ်။
အဆစ်ပေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဆီမှာ ပေါနေလို့မဟုတ်ဘူး။
ကုန်ရင် ကုန်တယ်လို့မမှတ်နဲ့။ မားကက်တင်းလို့မှတ်။
ပြောရမှာတော့ အရှည်ကြီးပဲ။ အခုတောင် စာအတော်ရှည်နေပြီ။
ဒီထိတောင် ဖတ်လာတယ်ဆိုတော့ တော်တော် စိတ်ဝင်စားလို့ပဲ။
ကျွန်တော့် မားကက်တင်း အိုင်ဒီယာ (၃၀) သင်တန်း လာတတ်ဗျာ။
လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင် ငွေပြန်အမ်းပေးလိုက်မယ်။ 😁😁😁
မကြေငြာနဲ့ ပျံ့နှံ့စေပါ ဆိုတာ ..ဒီလိုဗျ။
ကြော်ငြာတယ်ဆိုတာ ဌက်အုပ်ကြီးထဲကို လေးဂွနဲ့ပစ်လိုက်သလိုပဲ တစ်ကောင်မဟုတ်တစ်ကောင်တော့ထိမှာပါလေ ဆိုတဲ့ မျှော်လင်ချက်နဲ့ပစ်သွင်းလိုက်တာ။
ပျံ့နှံ့စေပါ ဆိုတာ က အခုဖြစ်နေတဲ့ COVID လိုပဲ၊ အကြောင်းအရာ၊အိုင်ဒီယာတစ်ခုကို တစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကို ပျံ့နှံ့စေတာ။
ဘယ်အရာက ပိုထိရောက်သလဲဆိုရင် အခုချိန်ထိ ကျွန်တော် အိမ်ထဲမှာ နေ၊ ဘယ်မှမသွားရပဲ .. ဒီစာရေးနေတာက သက်သေပဲလေ။
အဲဒီ အစွမ်းကြောင့်ပဲ မိတ်ဆွေလဲ ဒီစာကို ဖတ်နေတာ မဟုတ်လား။
မဟုတ်ရင် … စာဖတ်ဖို့အချိန်တောင်မရှိလောက်ဘူး..ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ။
မလိမ်နဲ့ ။ သိဒယ်။ ပြုံးနေလို့။ ။ 😊